Muddee 23, 2016
Breitscheid,gabayaa Jermenii ta nama 12 keessatti fixan
Gabayaa Berlin,Jermen Wiixata dabre nama 12 bombiin keessatti fixan taan amma ya bananii poolisii hedduu fi mirgaa bitaan dallaa dhagaa itti jaaranii eeguutti jiran
Gabayaan tun ta kiristaanii mi’a gaafa dhaloota Yessoo Kiristoo, Christmas keessatti guguran bitachuuf itti dhufu.Fulaan akkana itti nama hobbaasan gabayaa Breitscheid teessoo mootummaa Jermenii Beliin keessa.
Poolisiin Jermenii namicha akkana nama fixe barbaadachumatti jirti.Eegii Wiixataatii asitti gabayaa sun hardha bananii amma mirgaa fi bitaalleen eeguutti jiran.
Chaansileeriin (bulchituu) Jermenii,Angilaa Merkel “yoo dhuguma namii shakkan ka ufiifuu biyya ufiitii balaa baqatee ummata akkana itti baqatee fi isa gargaare fixe waan guddoo garaa nama nyaataa,” jetti.
Poolisii hedduu fi mirgaa fi bitaa isiillee dallaa dhagaa itti jaaranii eeguutti jiran.Namicha badaa tokkotti bombii makiinaatti fahee gabayaa wadhakkaan seenee keessatti gadi lakkisee nama fixee baqatee bahe.
Namichii nama fixe kun dhalootaan Tuniziyaa,Anis Amir jedhanii nama ganna 24 Awurooppaa cufa keessa barbaaduutti jiran.Namii kun galgala,yoo namii gobbatee wa bitachuuf walti dhufe makiinaa fahiisaa guddaa ummatatti gadi lakkisee 12 ifxee 40 caalaa mammadeesse.
Anisiin kun seera malee Jermen dhufee warqata baqataallee dhowwatan. Silaa ji’a tokkoon duratti Jermen keessaa baasuu malaniiyyuu jedhan bulchootii Jermen.
Raashiyaan Ajjeechaa Ambaasadar Andreel Laalchise Ibsa Xumuraa Kennuuf Yeroon Akka Hin Geenye Beeksiste
Ripaablikii Dimokraatawaa Kongoo Keessatti Muddamsi Hammaataa Jira